FJKM Ankadifotsy NY FAHATERAHANA INDRAY / Katekomena / Fampianarana / Accueil - FJKM Ankadifotsy
NY FAHATERAHANA INDRAY01/11/2017 13:04
Ny fahaterahana indray dia asan'Andriamanitra, ny anjarantsika dia ny manaiky fa mpanota isika ka mila mandray ny famonjena atolony ao amin'i Jesoa Kristy
Mazava sady hentitra ny tenin'i Jesoa raha nihaona tamin'i Nikodemosy Izy hoe : " RAHA TSY ATERAKA INDRAY IANAREO DIA TSY MAHAZO (mahita) MIDITRA NY FANJAKAN'ANDRIAMANITRA " Jao 3, 3-5
Mazava ihany koa fa mpanota isika olombelona (cf Genesisy 3, Romana 3)
Ny teny nampitondrain'Andriamanitra an'Isaia mpaminany (Isaia 59.1-2) dia manambara amintsika fan oho ny otantsika dia TAFASARAKA lasa lavitra Azy isika.
NOHO IZANY, mba hahatongavantsika amin'ny tanjona hoe: TERAKA INDRAY, dia TSY MAINTSY MANAIKY ISIKA FA "MPANOTA"
Tsy misy famelankeloka raha tsy avy amin'Andriamanitra ihany, koa tsy maintsy mangataka ny mba hamelany nay helotsika koa isika. Hoy indrindra I Jaona Apostoly: " raha miaiky ny fahotantsika isika dia MAHATOKY sy MARINA Izy ka hamela ny helotsika" I Jaona 1.9-10
AFAKA mino isika amin'izany fa TAFAHAONA amin'ny Tompo; izany hoe "VOAVONJY",
"TERAKA INDRAY", "TONGA ZANAK'ANDRIAMANITRA"
Tonga mpandova ny fanjakan'Andriamanitra isika, izany hoe TAFIDITRA AO AMIN'NY FANJAKAN'ANDRIAMANITRA isika.
Na isika "mpandova" avokoa ary ny Haren'Andriamanitra fa tsy maintsy haitsika ny maka ireny ho antsika.(Salamo 127.1-2)
Ny "Fahavarana" hikely aina mba hitomboantsika no hananantsika bebe kokoa hatrany ireo haren'Andriamanitra.
Hoy ny Hebreo 10.25 hoe:"AZA MAHAFOY NY FIARAHANTSIKA MIANGONA… fa amin'ireo Fotoana iarahantsika mivavaka no HITOMBOANA MIARAKA". Natao ho Fiangonana (fiparitahana, fisarahana, fitsitokotokoana) miara mandeha manaraka ny Tompo ilay namonjy antsika isika.
TERAKA INDRAY (ateraka indray) vakio ny Jaona 3.3-5; cp Jaona 1.12-13)
Atao mazava fa TSY ASAN'OLOMBELONA (na vitan'olombelona) ity MITERAKA INDRAY antsika ity, fa "Asan'Andriamanitra" irery.(cp Jeremia 13.23).
IZY NO "MIASA" amin'ny alalan'ny Fanahy Masina mba HITERAKA INDRAY antsika ("naître de nouveau, la nouvelle naissance"). Raiso ny fanazavana ataon'i Jesoa hoe :"ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, renao ny feony fa TSY FANTATRAO izay niaviany na izay halehany; dia toy izany izay ATERAKY NY FANAHY" (cf Jaona 3.8)
Efa voalazan'i Jesoa ao amin'ny Jaona 1.12-13 fa teo "IZAY NANDRAY AZY DIA…NATERAK'ANDRIAMANITRA"
Ny Romana 10.9-10 no efa nampianatra antsika momba izany:
Manaiky an'I Jesoa amin'ny vava
Mino Azy amin'ny fo
Dia VONJEN'ANDRIAMANITRA (=hateraka indray)
Fa ilay Jaona 3.5 dia mamaritra tsara hoe ATERAKY ny rano sy ny Fanahy.
Azo takarina avy amin'ny Asan'ny Apostoly 2.38 io izay manambara fa ny hoe "ateraky ny rano", dia ny fankatoavana ny Tenin'Andriamanitra, ka manaiky ny BATISA (amin'ny rano)
Atao Batisa amin'ny rano, izay "Sarin'ny Tenin'Andriamanitra" ianao, fa ny Fanahy Masina no "Miteraka indray " anao. (cp Titosy 3.3-7; FFPM 246.3)
Fa ny Efesiana 2.8-10 no milaza fa tena tsy avy aminao na noho ny fahamendrehanao, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra io Famonjena anao io. Mila raisinao io Fanomezan'Andriamanitra io ary TSY IALANAO "mandra-piavin'ny Tompo"
"TSY MISY (maro) IREO NIHEMOTRA fa ny MANGATSIAKA amin'ny finoana no betsaka"
Tsy asantsika olombelona fa Asan'Andriamanitra ny "MITERAKA INDRAY" antsika. Andraikitsika kosa ny manaiky ny ASANY ato amintsika.